Hopper Dredge Nosoratan'i Ellicott Completes asa tao amin'ny Reniranon'i Mississippi
Jona 1, 2010
Source: Famoronana androany
Paul Howard Construction dia mampiasa dredge Ellicott® Brand 670 amin'ity tetikasa ity.
Ny Tafika Amerikanina Amerikanina, Distrikan'i New York, ny fifanekena dia nanomboka ny fanodikodinam-bokatra faharoa tany amin'ny morontsiraka Moriches Bay amin'ny fantsona federaly Long Island Intracoastal Waterway tamin'ity herinandro ity. Paul Howard Construction, avy amin'ny Greensboro, NC, dia nomena fifanarahana $ 1.45 tapitrisa mba hanatanterahana fikojakojana ao amin'ny faritra Moriches Bay amin'ny fantsona mankany amin'ny halalin'ny fahazoana an-tongotra 6.
Mba handraisana ny loharanon-dranomasina saro-pady, nizara roa dingana ity tetikasa ity ary hetsika roa samy hafa. Dingana voalohany, izay nifantoka tamin'ireo faritra tao amin'ny faritra Moriches Bay tamin'ny fanaovana tsipoitra mafy indrindra, no vita tamin'ny fiandohan'ny taona teo. Ny dingana roa, ny dingana farany, dia ho vita amin'ny fiandohan'ny faran'ny fahalavoana raha toa ka azo atao ny manao fanodinkodinana amin'ny tontolo iainana.
“Faly izahay fa hanatanteraka ny dredging ao amin'ny Moriches Bay Reach amin'ny fiheverana ny filan'ny besinimaro momba ny filaminan'ny besinimaro, amin'ny alàlan'ny fandavahana ny faritra misy olana lehibe indrindra amin'ny lohataona, sy ny filàn'ny tontolo iainana ao an-toerana, amin'ny fanaparitahana ny asa ho dingana roa handraisana ireo ririnina any anaty ririnina sy ny fiainana an-dranomasina eo an-toerana ao amin'ny ekôkôzika bay, ”hoy ny komandin'ny distrikan'i New York, Kolonely John R. Boulé. "Ary amin'ny farany, ity asa ity dia hanampy amin'ny làlana azo antoka ho an'ireo mpandeha sambo fialamboly any amin'ny faritra ary koa ireo mpiara-miombon'antoka federaly ao amin'ny Coast Guard."
Manodidina ny 35,000 metatra toradroa manomboka amin'ny dingana roa dia esorina amin'ny fantsom-pivoarana ary hapetraka eo amin'ny Pantai Cupsogue akaiky. Ny fantsona Federal Long Intracoastal Waterway Federal Channel dia 33.6 kilaometatra ary mamakivaky ny ranomasina any atsimo atsinanan'i Long Island mamakivaky ny Great South Bay, ny Brookport Bay, ny Narrow Bay, ny Moriches Bay, ny Quantuck Bay, ary ny Shinnecock Bay.
Ny fikojakojana ny làlan-drano Long Island Intracoastal dia tanterahana farany tamin'ny volana Novambra 2003 hatramin'ny Janoary 2004. Ny volan'ny fitaovana dredged dia nesorina tao amin'ny Shinnecock Bay Reach tamin'ny taona fisakafoanana dia 2004 ny metatra cubic 26,085. Talohan'izay, ny fahatongavan'ny Moriches Bay dia nirongatra tao amin'ny taona fisakafoanana 2003 miaraka amin'ny fanesorana ny metatra cubic 53,000.
Ny distrikan'i New York dia tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny loharanon'ny rano an'ny Corps of Engineers, ny fivezivezena ary ny hetsika mifehy any avaratra atsinanan'ny New Jersey, atsinanana sy atsimo afovoany New York State, ao anatin'izany ny New York
Seranan-tsambo sy Long Island, ary faritra ao Vermont, Massachusetts, ary Connecticut. Ny Distrika koa dia tompon'andraikitra amin'ny famolavolana sy fananganana amin'ny fametrahana ny Tafika sy ny Air Force any New Jersey, New York, Virginia ary any ampitan'ny Greenland.